Dad badan oo ku dhintay iyo kuwo ku dhaawacmay qarax lala beegsaday Jarmalka | Berberanews.com
Home WARARKA Dad badan oo ku dhintay iyo kuwo ku dhaawacmay qarax lala beegsaday...
Dad badan oo ku dhintay iyo kuwo ku dhaawacmay qarax lala beegsaday Jarmalka
Berlin(Berberanews):- Ugu yaraan Sagaal Ruux ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen, Konton Qof tiro ka badanina ay dhaawacmeen, ka dib markii Gaadhi wayn oo kuwa Xamuulka ah la dhex-eryey Suuq ay Dad badani ka Dukaamaysanayeen si ay isugu diyaariyaan Ciidda Kiristaanka, kaasoo ku yaallay magaalada Berlin ee Caasimadda Waddanka Jarmalka, sida ay Booliska Dalkaasi caddeeyeen.
Wasiirka arrimaha gudaha ee Dawladda Jarmalka Andreas Geisel, ayaa sheegay inaan weli si rasmi ah loo aqoonsan sababta shilkani u dhacay iyo cidda ka dambaysay dhibaatada intan le’eg. Balse, Saraakiil Booliska Berlin ka tirsan, ayaa sheegay inay ka shakisan yihiin in weerarkaasi ahaa mid Argaggixiso oo loogu talo-galay in lagu dhibaateeyo Dadka isu diyaarinayey Ciidda Kiristaanka ee Kirismiska loo yaqaanno oo sannad kasta dabayaaqada bishan December Kirstaanku u dabbaal-dego.
Warbaahinta Jarmalka oo soo xiganaysa Saraakiil Booliska ka tirsan, ayaa baahisay, in Darawalkii Gaadhigaas waday gacanta lagu dhigay, isla markaana ay Ciidanka Ammaanku xidheen, waxaana lagu samaynayaa oo durba la bilaabay baadhitaanno la xidhiidha waxa falkan ku kallifay.
Madaxweynaha Jarmalka Joachim Gauck, ayaa weerarka ka dib War Qoraal ah oo uu soo saaray caawa ku sheegay inuu aad uga xun yahay dhacdada foosha-xun ee lagula kacay Shacabkiisa Faraxsanaa ee isu-diyaarinay inay farxad ku ciidaan Ciidda Kirismiska, waxaanu intaas ku daray inay cambaaraynayaan dhacdada Caasimadda dalka ka dhacday.
Muuqaal Fiidyoow ah oo muujinaya goobtaas, ayaa laga arkay Dad dhaawac ah oo Dhulka yaalla iyo meelihii Alaabada lagu iibsanayey oo Burburay iyo sidoo kale Geedo ama Dhir kuwa Quruxda ah oo Dhulka ku dhacay. Weriyeyaasha ayaa ku warramaya in Suuqaas oo iyagoo Faraxsan Dadku ka adeeganayeen mar qudha isu beddelay Burbur, Qiiq, Qaylo, Dhiig iyo Madal Naxdineed.
Suuqa ayaa ku yaalla Breitscheidplatz, oo u dhaw Kaniisada Kaiser Wilhelm ee Kurfuerstendamm ee galbeedka Caasimadda Jarmalka ee Berlin. Waxaa halkaas tegay Weriye Berliner Morgenpost oo u warramay qaybta dunida la hadasha ee Idaacadda BBC-da, waxaanu War uu goobtaas ka diray ku sheegay in waxa uu arkay ee meeshaa ka dhacay yahay wax xun oo aad looga naxo.
Previous articleMaxamed Bk Ilmo Caashaq Hees cusub
Next articleMagacyada Xildhibaanno ka soo jeeda beelaha Somaliland oo loo doortay mudanayaasha cusub ee Golaha Shacabka Federaalka